DAb Qabsaday Mid kamid ah Duulimaadyada British Airways – Radio Daljir
Seteembar 9, 2015 7:26 b 0
Arbaco, September 09, 2015 (Daljir) — Mid ka mid ah Diyaaradaha ay leedahay Shirkadda British Airweys nooceeduna ahaa; A Boeing Co. 777-200 ayaa waxaa qabsaday dab kaddib markii uu Qarxay mid ka mid ah matoorrada diyaaradda xilli ay isku diyaarinaysay inay ka duusho garoonka diyaaradaha Magaalada Las Vegas, iyadoo rakaabkii saarnaa si dhaqso ah loo dajiyay.
Diyiaarada ayaa la sheegay in si lama filaan ah uu u qarxay matoorka bixida ku yaalla, waxaana xilliga uu shilkan dhacayo ay ahayd habeenkii xalay xilli dambe, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee Las Vegas.
“Intii uusan dabku xoogeysan ayaan ku guuleysannay inaan rakaabkii diyaaradda si dhaqso ah uga soo dajinno, mana jiraan khasaare weyn oo ka dhashay shilkan,” ayuu yiri Afhayeen u hadlay Maamulka Garoonka.
Sidoo kale, Wararka ayaa sheegaya in diyaaradda ay saarnaayeen xilliga uu shilku dhacayo 157 rakaab ah saddex duuliye iyo 10-ruux oo shaqaale ah, ayna ku socotay Xarunta dalka Britain ee London.
Mas’uul u hadlay Shirkadda British Airweys ayaa sheegay in dhowr qof oo ka mid ah rakaabkii diyaaradda saarnaa loo qaaday Isbitaal, kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo fudud oo dabku uu dhaliyay.
Illaa hadda lama oga sababta dhalisay in Matoorku qarxo, balse wararka hordhac ah ayaa sheegay in dabka uu ka dhashay khalad dhanka dabka diyaaradda ah oo loo maleynayo inuu sababay qaraxa matoorka
Madaxda Somalia oo Soo dhaweeyay in Maraykanku Dib u Bilaabay xiriirkii uu lalaha Dalka